Fepetra sy fepetra - Alietc.com
VAKIO NY FANDAHORANAO SY NY FIFIDIANANA. AZA ATAO MBOLA AZO MBOLA AZO ARY ATAO ATAO NY FIDERANA MBOLA AZONAO AZONAO MBOLA KOKOA.
Tongasoa eto ALIETC! Mpitarika eo amin'ny sehatra e-varotra an-tserasera sy varotra. Ireo fepetra sy fepetra ireo dia mamaritra ny fitsipika azo ampiharina amin'ny fidiranao sy ny fampiasana ny tranokala, tranonkala finday ary vavahadin-tserasera ary webspace izay miasa sy fananan'ny ALIETC.com.
Ny fampiharana sy ny fanekena ny fepetra
Amin'ny alàlan'ny sonia sy ny faneken-kevitry ny lalànay momba ny fampiasana anao dia manaiky ny fepetra sy ny fepetra voarakitra sy voaresaka ao amin'ity antontan-taratasy ity sy ny politikanao manokana ianao. Ny serivisy ato (ao anatin'izany ny serivisy fampiroboroboana sy ny fanavaozana vetivety na fanerena ihany koa) dia misy ny lisitr'ireo Top Listing na Sponsored Listing sy ny serivisy hafa izay mety ho ampahafantarin'ny ALIETC.com indraindray. Ity antontan-taratasy ity sy ny fitsipi-pifehezana hafa sy ny politika hafa dia voaresaka miaraka amin'ny 'Terms'. Amin'ny alàlan'ny fisoratana anarana sy ny fampiasana ny toeran'ny tranokala sy ny vokatra dia manaiky ianao hanaiky sy hiasa mifanaraka amin'ny Fepetra rehetra.
Fameperana taona Ny fidirana sy ny fampiasana serivisy ALIETC.com, endri-javatra ary rindrambaiko amin'ny alàlan'ny tranokalanay dia voafatotra amin'ny olona manana taona ara-dalàna sy ambony. Ny vanim-potoana ara-dalàna dia tsy maintsy ambara ho fifanarahana mifamatotra amin'ny serivisintsika ary ireo izay misoratra anarana amin'ny serivisintsika eo ambanin'ny vanimpotoana ara-dalàna dia tsy mahazo mandray serivisy eo ambanin'ny lalàna iraisam-pirenena, ao anatin'izany ny faritra na firenena ivadinao. avy. Izay olona hita fa nanao fanamelohana diso momba ny taonany ara-dalàna dia mendrika ny hanaisotra eo amin'ilay toerana haingana sy hamerana eo no ho eo amin'ilay kaontiny.
Fifanakalozana eo anelanelan'ireo mpividy sy mpivarotra: com dia manome sehatra an-tserasera elektronika amin'ny fifanakalozana, fividianana ary fivarotana vaovao sy fifanakalozana. Ny mpampiasa dia afaka mitantana, manaiky, mametraka ary mamarana ireo baiko sy fanomezana ny vokatra. Tsy mifehy na tsy tompon'andraikitra na tompon'andraikitra amin'ny mpivarotra na tsy fahaizan'ny mividy ny ALIETC.com hamita ny fividianana. Tsy tompon'andraikitra amin'ny fiarovana, ara-dalàna, na ny fisian'ny vokatra na serivisy koa ny ALIETC.com.
fanitsiana:com dia mety handray fanovana sy fanitsiana ny lalàna mifehy azy ireo sy ny politikany amin'ny fotoana rehetra amin'ny alàlan'ny famoahana ireo fanovana ilaina sy fanavaozana momba ny mombamomba ny serivisy momba ny serivisy sy ny tranonkala. Amin'ny alàlan'ny fanohizana ny fidirana amin'ny serivisy aorian'io fotoana io, manaiky ny fampahalalana vaovao sy nasiam-panavaozana ianao. Ny fampahalalana nohavaozina sy nohavaozina dia mihatra aminao indray mandeha ao amin'ny Fepetra sy fepetra ary fampahalalana momba ny tranonkala.
Mpikambana tsy maintsy:
Manatontosa hetsika mifanaraka amin'ny lalàna mifehy sy ny lalàna mifandraika amin'izany
Manaova fitantanana raharaham-barotra amin'ny finoana tsara
Aza mampiasa tranokala hanendrikendrika olona
Tsy miditra amin'ny Spamming na Phishing
Tsy mandray anjara amin'ny hetsika na ny tetika manimba ny fahamarinan'ny angon-drakitra, rafitra na tambajotra ampiasain'ny ALIETC.com
Tsy tafiditra amin'ny otrikaretina solosaina na rindrambaiko manimba hafa
Aza manao hetsika tsy ara-dalàna toy ny fanaovana kopia, mamerina na manararaotra ny lafiny rehetra amin'ny serivisy ALIETC.com
Manome fampahalalana marina.